Qaybaha ugu muhiimsan ee jawiga iskuulka waa ka qeyb qaadashada qoyska iyo bulshada. Waxaan aad ugu faraxsanahay kumanaanka saacadaha iskaa wax u qabso ah ee hibada u leh iskuulkeena sanad walba. Waxaan soo dhaweyneynaa tabarucaadka gaarka ah ee qoys walba uu awood u leeyahay in uu qeybsado. Maalin kasta oo dugsi la bixiyo, waalidiinta, ayeeyada iyo ayeeyooyinka, iyo xubnaha kaladuwan ee reerka iyo bulshada waxaa laga heli karaa fasaladeena oo ay uga gudbi karaan hoolka ardayda, maadaama ay waqtigooda firaaqada u bixiyaan ardayda. Waxaa jira tababarayaal wax aqrinaya, waalidiinta fasalka, xubnaha PTO, guddiyada qorsheynta dhacdada, kuwa hadla, goobjoogayaal, iyo xitaa qaar ka mid ah xubnaha qoyska oo imanaya oo qado u wata cunugooda.
Si aad ugu tabarucdo mid kastoo ka mid ah Dugsiyada Dadweynaha ee Green Bay, waa inaad marka hore dhammaystirtaa baaritaanka asalka. Tan waxaa ku jira iskaa wax u qabso ah ee dugsiga ilmahaaga iyo safarada safarka ah ee safarka ah. Baadhitaanka taariikhdu waxay u baahan tahay in la cusboonaysiiyo sanad dugsiyeed kasta. Waxaan sugeynaa in lagaa caawiyo iskuulkeena!
Hubinta Taariikhdii Hore
Waxaa jira siyaabo fara badan oo lagula xiriirin karo bulshada dugsigaaga. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa caawino sidii aad u caawin laheyd fasaladeena iyo safarada duulimaadka. Ma heshaa shaqo xiiso leh ama hiwaayad ah? Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad wax baratid inta lagu gudajiray usbuuca sahaminta ama waxbarid fasalka kobcinta? Qalab ku caawin kara? Waxaan kaliya lahaan karnaa mashruuc agagaarka dugsiga ah oo aad gacan ka geysan karto. Miyaad raadineysaa inaad kaalin door ah ku lug yeelato? Ku biir mid ka mid ah guddiyada PTO. Wax alla wixii aad jeceshahay inaad ka qeybgasho waxay noqon kartaa, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku tiirsannahay ku lug lahaanshaha qoysaska iskuuladayada.
Waxaan uga baahan nahay caawimaad DHAMMAAN dhacdooyinkayada iyo nashaadaadyada, si aan ugu darno ...
Farshaxanka lagu Xusuusto
Bulshada Dadka Waaweyn
Dabaaldegga Fasalka 8aad